Edere site Tranquillus | August 26, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Nhọrọ nke okwu nkwanye ugwu kacha dabara adaba
Mgbe ị na-ekpebi ịdegara onye ọrụ ibe, onye nlekọta ma ọ bụ onye ahịa akwụkwọ ozi azụmahịa, ọ dịghị mfe ikpebi adreesị nkwanye ùgwù kachasị mma. Iji mee nke a na-adịghị mma, ihe ize ndụ dị ukwuu iji kpasuo onye na-emekọrịta ihe na ịgafe onye na-abụghị onye mepere emepe ma ọ bụ onye na-enweghị mmasị na koodu nke nkwanye ùgwù. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite nka nke akwụkwọ ozi gị, ị ga-agụrịrị akụkọ a.
Okwu nsọpụrụ maka onye ahịa
Banyere ụdị arịrịọ ị ga -eji maka onye ahịa, ọ dabere na ọnọdụ mmekọrịta gị. Ọ bụrụ na ịmaghị aha ya, ọ ga -ekwe omume ịnabata usoro oku "Sir" ma ọ bụ "Madam".
Ọ bụrụ na ịmaghị ma onye ahịa gị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, ị nwere nhọrọ ịsị "Mr / Mrs".
Ná ngwụsị nke ederede gị, nke a bụ ngosipụta nkwanye ugwu abụọ maka onye ahịa:
Biko nabata, Nna m ukwu, ngosipụta nke mmetụta nsọpụrụ m.
Biko, Madam, nabata mmesi obi ike m ekele m.
Usoro nkwanye ugwu maka onye nlekọta
Mgbe ị na -edegara onye nwere ọkwa ka elu, ọ ga -ekwe omume iji nke ọ bụla n'ime okwu ọma ndị a:
Biko nabata, Maazi Onye njikwa, mmesi obi ike nke ekele kacha mma.
Biko nabata, Maazị Director, ngosipụta nke nkwanye ùgwù miri emi m.
Biko nabata, Madam, ngosipụta nke echiche m kacha elu
Biko nabata, Onye isi oche Madam, mmesi obi ike nke echiche m.
GỤỌ Wepụ iche email ọkachamara site na leta
Usoro nkwanye ugwu maka onye ọrụ ibe ya n'otu ọkwa ọkwa
Ịchọrọ izigara onye nwere ọkwa ọkwa dị ka gị ozi, lee ụfọdụ ngosipụta nke ịkwanyere ugwu nke ị nwere ike iji.
Biko kwere, Nna m ukwu, mmesi obi ike nke ezi ekele m
Biko nabata, Madam, ngosipụta nke mmetụta m kacha nwee obi ike
Kedu okwu na -egosi nsọpụrụ n'etiti ndị ọrụ ibe?
Mgbe ị na -edegara onye ọrụ ibe gị otu ọrụ dị ka onwe gị, ị nwere ike iji okwu ọma ndị a:
Biko nata, Sir, ngosipụta ekele m.
Biko, Nwanyi, nabata ngosi nke ekele nwanne m.
Kedu usoro ịkwanyere ugwu ugwu maka onye nwere ọkwa dị ala?
Iji zigara mmadụ ọkwa dị ala karịa nke anyị, lee ụfọdụ okwu ọma:
Biko nabata, Nna m ukwu, mmesi obi ike nke ekele m kacha mma.
Biko nabata, Madam, mmesi obi ike nke ihe ndị kacha amasị m.
Olee okwu ndị na -egosi nsọpụrụ maka onye a ma ama?
Ịchọrọ ka gị na onye na -egosi ọkwá dị elu na -edekọ ọnụ na ị maghị usoro ga -ezu. Ọ bụrụ otu a, lee ụzọ ngosipụta abụọ:
Site n'ekele m niile, biko nabata, Nna m ukwu, ngosipụta nkwanye ùgwù miri emi
Biko kwere, Madam, na ngosipụta nke echiche m kacha elu.
Onye nnata ọ bụla nwere usoro nkwanye ugwu dabara adaba! Nọvemba 3, 2021Tranquillus
gara agaKedu ka esi eji ihe onyonyo echiche ka iburu n'isi nke ọma? - VIDIO
-esonụUsoro ozi ngwakọ na nchekwa, nlọghachi n'eziokwu